INkosi yamaVenda isikhuze udlame eVuwani | News24
INkosi yamaVenda isikhuze udlame eVuwani
Vuwani - INkosi yamaVenda isiyalele ababhikishi baseVuwani, eLimpopo, ukuba baqede nya ngodlame nokucekela phansi izikole endaweni.
Nokho ithe iyabeseka abantu bayo ekwaleni ukujoyina umasipala omusha oseMalamulele.
UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo u-Angie Motshekga ubambe umhlangano nenkosi ngoLwesihlanu ukudingida mayelana nemibhikisho eqhubekayo kuleya ndawo, kwashiswa inqwaba yezikole.
Zibalelwa ngaphezulu kuka-20 izikole ezicekeleke phansi kule mibhikisho.
OLUNYE UDABA: Izakhamuzi zishise izikole ezingu-9 ngenxa yokudinwa
INkosi uToni Mphephu Ramabulana ithe kumele luphele manje udlame: "Angisafuni ukuphinde ngibone udlambedlu. Abantu bashisa ifenisha, uma beshisa izikole lokho kusho ukuthi abantwana bethu abanalo ikusasa."
Kepha uthi uyabeseka kulokhu abakubhikishelayo.
"Ngiyabeseka njengoba bemelene nomasipala omusha. Ngizozama ukukhuluma nomengameli wezwe ukuze ezokwazi ukuza nesixazululo."